Ny traikefa vitsivitsy amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso COVID-19 | Shoufan Metal
Ny traikefa vitsivitsy amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso COVID-19
Ankehitriny dia miparitaka erak'izao tontolo izao ny virus Corona. Vao tsy ela akory izay dia nahazo vaovao be avy tamin'ny mpanjifa izahay momba ny toe-javatra misy ny fireneny. Fantatray fa ny sasany aminareo dia manahy momba ilay viriosy.
Tamin'ny lasa dia niaina zavatra mitovy amin'ny niainanao izahay izao. Te hizara traikefa aminao izahay momba ny fomba laninay amin'ny fotoana sarotra. Manantena aho fa hanampy kely ity.
Raha ny angon-drakitra statistika dia tsy mampihoron-koditra loatra ilay virus, toy ny flue izay nitranga matetika. Fa ny fielezan'ny virus corona dia mahery. Mandritra ny valanaretina dia asaina mijanona ao an-trano izahay ary aza mivoaka. Satria raha olona maro no voakasik'izany amin'ny fotoana iray dia tsy ampy ny fandriana sy ny dokotera ao amin'ny hopitaly. Ny ankamaroan'ny olona namoy ny ainy satria tsy voatsabo amin'ny fotoana tampony.
Mandritra izany fotoana izany, rehefa mahita ireo olona voakasik'izany izy ireo, ireo olona nifanena taminy sy nifandraisany teo aloha dia ho hitany ary hangatahana quarantine mandritra ny 14 andro, raha tsy misy ny soritr'aretina mifandraika amin'ilay virus, midika izany fa voaro izy ireo.
Raha voakasik'izany izy ireo ary tsy dia matotra dia afaka mampiasa fanafody na fanafody nentim-paharazana sinoa avy any amin'ny hopitaly izy ireo, mijanona ao amin'ny efitrano faran'izay kely karamaina mba ho sitrana. Raha tsy matotra dia maro no afaka sitrana mandritra io fotoana io.
Mitazona toe-po tsara, manaova fanatanjahan-tena bebe kokoa ary mijanona ao an-trano.
Raha tsy maintsy mivoaka ivelany isika dia tena ilaina ny sarontava. Ary rehefa mody any an-trano dia mila diovina amin'ny alikaola 75% ny akanjo. Amin'izany fomba izany dia ambany dia ambany ny mety ho voan'ny aretina
Fotoana tsara ahazoana mankafy ny fotoana miaraka amin'ny fianakavianay satria matetika, ny fotoana dia mitaky fotoana be dia be. Mandritra izany fotoana izany dia misy fotoana ampy hamakiana sy hianarana ireo zavatra mahaliana anao. Ny fitadiavana zavatra hatao dia hahatonga antsika hahatsapa ho tsara kokoa.
Misaotra ny fitahiana rehetra azon'ny mpanjifanay sy ny namantsika.
Mandritra ny fotoan-tsarotra dia mahazo fanampiana be dia be avy amin'ny firenenao izahay.
tena ankamaminay izany.
Ankehitriny izahay hitahy anao rehetra ary azonay antoka fa areti-mandringana ity handalo tsy ho ela. Ary ny firenentsika dia hanampy sy hizara ny traikefa rehetra. Aza matahotra, azafady, miaraka amin'ny fianakaviana lehibe eto an-tany izahay. Raha mila fanampiana ianao dia ampahafantaro anay.
Sary avy any Sina isan'andro